२०७६ फागुन, १४
फागुन १४, काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारमा बुधवार हालसम्मकै सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५० दशमलव ९३ अंक बढ्दा रू. ४ अर्ब १५ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भई रकमका आधारमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । यसअघि नेप्सेमा आइतवार रू. ३ अर्ब ६० करोडको कारोबार भएको थियो । यस्तै बुधवार ५० दशमलव ९३ अंकले नेप्से परिसूचक बढ्दा १ हजार ५९६ दशमलव १३ विन्दुमा कायम रहेको छ । जुन ३० महीना यताकै उच्च विन्दु हो । यस अघि २०७४ भदौ १४ मा परिसूचक १ हजार ५९८ दशमलव ३६ विन्दुमा रहेको थियो ।
बजार पछिल्लो दुई सातामा बुलिशतर्फ लागेको छ । यस दिन १ हजार ५४७ दशमलव २१ विन्दुबाट शुरू भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो आधा घण्टामा सामान्य अंकले बढेर १ हजार ५६४ दशमलव शून्य ५ को विन्दुमा रहेको थियो । त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको बजार अन्त्यमा मंगलवारको तुलनामा ३ दशमलव ३० प्रतिशत बढेको हो ।
बुधवार कारोबारमा आएका १२ समूहकै परिसूचक बढेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक सकारात्मक रहेको छ । यस दिन सर्वाधिक बढेर बन्द हुने परिसूचकमा जीवन बीमा समूहको परिसूचक ६ दशमलव १२ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ४ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ ।
यस्तै बैंकिङ, होटल, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर बन्द भएको छ भने ‘अन्य’ समूहको परिसूचक २ दशमलव १८ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूहको परिसूचक १ दशमलव ५४ प्रतिशत बढेको छ भने व्यापार, जलविद्युत, वित्त, र लघुवित्त समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम बढेर बन्द भएको छ ।
हाल सम्मकै उच्च कारोबार
बुधवार रू. ४ अर्ब १५ करोड ४८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३८ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी हो । गत कारोबार दिन मंगलवार रू. २ अर्ब ९९ करोड बराबर रकमको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ९ दशमलव ४९ अंक बढेर ३३६ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट
बुधवार बढेर बन्द भएको बजारमा ४ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । सर्किट लाग्ने कम्पनीहरुमा एभरेष्ट बैंकको परिवर्तिय अग्राधिकार शेयर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनिलिभर नेपाल र कालिका पावर कम्पनी रहेका छन् । यस्तै, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापकतर्फको शेयर, सिभिल लघुवित्त र जोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
त्यसैगरी, शेयरमूल्य घटेर कारोबार हुनेमा राधी विद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ८ दशमलव २९ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १८८ कायम रहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ७ दशमलव ९६ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १०४ रहेको छ ।
बुधवार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको १ लाख ५० हजार २८६ कित्ता शेयरको किनबेच हुँदा रू. २१ करोड ९९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४९४ रहेको छ ।
कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा शिवम् सिमेन्टको रू. १८ करोड ४९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य भने रू. ७२६ कायम छ । त्यसैगरी, नेपाल बैंकको रू. १७ करोड ९६ लाख र हिमालयन डिष्टिलरीको रू. १६ करोड ७१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस्तै, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशिया बैंकको रू. १० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १८० कम्पनीमा ११७ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ४७ कम्पनीको घटेको छ । साथै, १६ कम्पनीको शेयरमूल्य भने स्थिर रहेको छ ।
नयाँ संक्रमित व्यक्ति पनि कतार एयरवेजबाट आएका[२०७६ चैत, १९]